(ဘာရတ်အိုဘားမား မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ဘာရက်ဟူစိန်အိုဘားမား ၂ (အင်္ဂလိပ်: Barack Hussein Obama II၊ မွေးရက် - ၄ ဩဂုတ် ၁၉၆၁) သည် အမေရိကန် ဆီးနိတ်လွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦး (senator) ဖြစ်ပြီး၊ အမေရိကန် ၂၀၀၈ ခုနှစ် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ တွင် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ သမ္မတလောင်း တစ်ဦးအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရာ ပြိုင်ဖက်အား မဲအပြတ်ဖြင့် နိုင်ခဲ့ပြီး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ (၄၄)ကြိမ်မြောက် သမ္မတအဖြစ် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၀ အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံး အာဖရိကန်-အမေရိကန် သမ္မတအဖြစ် အရွေးချယ်ခံ ခဲ့ရပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆို ရာထူးတက်ခဲ့သည်။ ရာထူးတက်၍ ၈ လကျော် ကြာပြီးနောက် ၎င်း၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အရေးကိစ္စများအား သံခင်းတမန်ခင်း ဖြေရှင်းနိုင်ရန်နှင့် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန် ကြိုးပမ်းချက်များအတွက် ၂၀၀၉ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် နိုဘယ်ဆုရန်ပုံငွေအဖွဲ့က အိုဘားမားအား ၂၀၀၉ ခုနှစ်၏ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရှင်အဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်သည်။ 
ကိုလမ်ဘီယာ တက္ကသိုလ် (Columbia University) နှင့် ဟားဗတ်ဥပဒေကျောင်း (Harvard Law School) မှ ကျောင်းပြီးသောအခါ community organizer နှင့် နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး ရှေ့နေ(civil rights attorney) အဖြစ် အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အထိ အီလီနွိုင်းပြည်နယ် ဆီးနိတ်လွှတ်တော်တွင် အမတ်ဖြစ်လာသည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၄ အထိ ချီကာဂိုတက္ကသိုလ် ဥပဒေကျောင်း တွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို သင်ကြားပို့ချခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးတော် (U.S. House of Representatives) အတွက် အမတ်နေရာ ယှဉ်ပြိုင်ရာတွင် အနိုင်မရရှိခဲ့သော်လည်း ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ အိုဘားမားသည် အမေရိကန်ဆီးနိတ် (အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်) ကန်ပိန်း ကိုကြေညာသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် မတ်လတွင် ဆီးနိတ်ရွေးကောက်ပွဲအား မဲရာနှုန်း အများအပြားနှင့်နိုင်ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအမျိုးသားညီလာခံ (Democratic National Convention) ၌ အဓိကမိန့်ခွန်း ပြောကြားသူဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် မဲရာခိုင်နှုန်း ၇၀% ဖြင့် နိုင်ခဲ့ပြီး ဆီးနိတ်လွှတ်တော်အမတ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၁၀၉ ကြိမ်မြောက်ကွန်ဂရက် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီလူနည်းစုသာ ပါဝင်သောအချိန်တွင် အိုဘားမားသည် သမားရိုးကျလက်နက်များ ချုပ်တည်းချက်နှင့် ဖယ်ဒရယ်ရန်ပုံငွေအသုံးပြုရာတွင် ပို၍ တာဝန်ယူမှုရှိစေရေးနှင့် ပတ်သက်သော အက်ဥပဒေများကို ထောက်ခံခဲ့သည်။ အရှေ့ဥရောပ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း နှင့် အာဖရိက သို့လည်း လေ့လာခရီးများသွားခဲ့သည်။ ၁၁၀ မြောက်ကွန်ဂရက်တွင် ဥပဒေပြုသူများအား ပြင်ပမှ လွှမ်းမိုးခြင်းကိစ္စ၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မရိုးသားမှုများကိစ္စ၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၊ နျူးကလီယား၊ အကြမ်းဖက်မှု နှင့် စစ်ပြန်များအား စောင့်ရှောက်ရေးတို့နှင့် ပတ်သက်သော အက်ဥပဒေများကို ထောက်ခံခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ တွင် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ ကမ်ပိန်း ကိုကြေညာခဲ့ပြီး အီရတ်နိုင်ငံတွင် စစ်တိုက်နေသော အမေရိကန်တပ်များဆုတ်ခွာရေး၊ စွမ်းအင်ကို အခြားနိုင်ငံများအား မှီခိုမှု လျော့နည်းစေရေး၊ ဥပဒေပြုသူများအား ပြင်ပမှလွှမ်းမိုးသူတို့၏ အရိပ်အငွေ့ လျော့နည်းစေရေး နှင့် အားလုံးနှင့်ဆိုင်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကြီးပွားရေးကို အသားပေးနေသည်။
၁၉၈၈ နှစ်ဆုံးတွင် ဟားဗတ်ဥပဒေကျောင်းကို စတင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ပထမနှစ်တွင် ရရှိသောအမှတ်နှင့် စာအရေးအသားပြိုင်ပွဲ များကြောင့် ဟားဗတ်ဥပဒေဝေဖန်ချက်ဂျာနယ်၏ အယ်ဒီတာဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒုတိယနှစ်တွင်ရွေးချယ်ပြီး ဥပဒေဝေဖန်ချက်ဂျာနယ်သမ္မတနှင့် လုပ်အားပေးစာတည်းမှူးဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် မီဒီယာများသည် အိုဘားမား၏ ဟားဗတ်ဥပဒေဝေဖန်ချက်၏ ပထမဆုံးလူမည်းသမ္မတဖြစ်ကြောင်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သတင်းပို့ကြသည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ဟားဗတ်၌ J.D. magna cum laude (ဒုတိယဂုဏ်ထူး ဥပဒေပါရဂူဘွဲ့) အောင်ခဲ့ပြီး ရှီကာဂိုမြို့ကို ပြန်လည်ရွှေ့ပြောင်းခဲ့သည်။ ဟားဘတ်ဥပဒေဝေဖန်ဂျာနယ်၏ ပထမဆုံးလူမည်းသမ္မတအဖြစ်အကြောင်း ကြေညာကြောင့် အိုဘားမားသည် လူမျိုးဆက်ဆံရေးဝတ္ထုရေးရန်အတွက်စာချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်ဥပဒေကျောင်းသည် အိုဘားမားကို ဝတ္ထုရေးရန်အတွက်ရုံးခန်းနှင့် အမှုဆောင်အသင်းဝင်အဖြစ် ကူညီထောက်ပံ့ခဲ့သည်။သူ၏ဝတ္ထု. Dreams from My Father ကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် စထုတ်ဝေသည်။
၂၀၀၂ ခုနှစ်အလယ်ပိုင်းတွင် အိုဘားမားသည် အမေရိကန် ဆီးနိတ်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် စဉ်းစားခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေး နည်းဗျူဟာပညာရှင်အဖြစ် ဒေးဗစ်အိတ်ဇယ်ရော့ဒ် အားခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ဒေးဗစ်အိတ်ဇယ်ရော့ဒ်မှ အိုဘားမားအား ယှဉ်ပြိုင်အရွေးခံမည့်အကြောင်းကို ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် တရားဝင်ကြေညာခဲ့သည်။ လက်ရှိ ရာထူးရရှိထားသူ ရီပတ်ဘလစ်ကင်အမတ် ပီတာ ဖစ်ဇ်ဂါရယ် နှင့် ထိုသူမတိုင်မီ ရာထူးရရှိခဲ့သူ ဒီမိုကရက်တစ် အမတ် ကာရိုး မော့စလီ ဘရောင်န် တို့က ပြိုင်ပွဲဝင်မည်မဟုတ်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည့်အတွက် ရီပတ်ဘလစ်ကင် နှင့် ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီဝင် အများအပြား ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ အကြိုရွေးကောက်ပွဲတွင် ယှဉ်ပြိုင်အရွေးခံသူ ၁၅ ဦးအထိ ရှိခဲ့သည်။ အိုဘားမား၏ ယှဉ်ပြိုင်အရွေးခံမှု ကို ကွယ်လွန်ပြီးသော ချီကာဂိုမြို့တော်ဝန် ဟာရိုးဝါရှင်တန်၏ ပုံများကို အထူးပြသတင်ဆက်ထားသော အိတ်ဇယ်ရော့ဒ်၏ ကြော်ငြာကင်န်ပိမ်းမှ လည်းကောင်း၊ ကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်သော ယခင်အီလီနွိုင်းမှ အမေရိကန်ဆီးနိတ်လွှတ်တော်အမတ် ပေါလ်ဆိုင်မွန်၏ သမီးမှ ထောက်ခံမှု တို့မှ လည်းကောင်း မြှင့်တင်ပေးခဲ့သည်။ သူသည် အကြိုရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲရာခိုင်နှုန်း ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းမျှရရှိခဲ့ပြီး သူ၏ နောက်မှလိုက်သော ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ပြိုင်ဖက်နှင့် ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းမျှ သာလွန်ခဲ့သည်။
အိုဘားမားသည် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစ၍ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းနှင့် စစ်ပြန်များရေးရာ ဆီးနိတ်ကော်မတီများ တွင် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် သူသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် စစ်ပြန်များရေးရာ ကော်မတီတို့မှ နုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး၊ အလုပ်သမားရေးရာ နှင့် ပင်စင်ရေးရာ နှင့် နိုင်ငံလုံခြုံရေး နှင့် အစိုးရရေးရာ ကော်မတီများတွင် တာဝန်အသစ်များကို ရယူခဲ့သည်။ သူသည် ဥရောပရေးရာ ဆိုင်ရာ ဆီးနိတ်ဆပ်ကော်မတီတွင်လည်း ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဆီးနိတ် နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး ကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်အနေနှင့် အိုဘားမားသည် အရှေ့ဥရောပ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အာရှအလယ်ပိုင်း နှင့် အာဖရိကတို့သို့ အစိုးရကိစ္စဖြင့် ခရီးများသွားခဲ့သည်။ သူသည် မာမွတ် အာဘတ်စ် ကို ပါလက်စတိုင်း သမ္မတမဖြစ်မီအချိန်က တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး နိုင်ရိုဘီတက္ကသိုလ်တွင် ကင်ညာအစိုးရ၏ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ မိန့်ခွန်းပြောခဲ့သည်။
ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတလောင်း ဘာရက် အိုဘားမားသည် ပထမအချီ စကားစစ်ထိုးပွဲအပြီးတွင် ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သည့် ရီပတ်ပလစ်ကန် သမ္မတလောင်း မက်ကိန်းအား အသာရနေပြီဟု ဆိုနိုင်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲအစတွင် နိုင်ငံရေးကိစ္စများအား အဓိကထား ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဟု အများကထင်မှတ်ခဲ့ကြသော်လည်း အမေရိကန်၏ ငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်း၏ အချက်အချာ ဝေါလ်စထရိစ်မှာ ဘဏ်များဒေဝါလီခံသည့် အရေးကိစ္စများ၊ ရေနံဈေးတက်မှုများနှင့်တကွ စီးပွားရေးပြဿနာသည် အဓိကဖြစ်ခဲ့သည်။
လက်တွေ့တွင်လည်း တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကိုမှန်ကန်စွာ ဦးဆောင်နိုင်သူကိုသာ အမေရိကန်ပြည်သူတို့က ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ကမ္ဘာအဝှမ်းမှ မျက်စိဒေါက်ထောက်ကြည့်နေသော ၂၀၀၈ ခုနှစ် အမေရိကန် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင် အိုဘားမား အနိုင်ရရှိခဲ့သောကြောင့် အိုဘားမားသည် အမေရိကန်သမိုင်းတွင် ပထမဦးဆုံးသော အာဖရိကနွယ်ဖွား လူမည်းသမ္မတဖြစ်လာသည်။
↑ Obama (1995), pp. 125–126. See also: Jones၊ Tim။ "Obama's Mom: Not JustaGirl from Kansas"၊ Chicago Tribune၊ March 27, 2007။ 2008-04-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 29 July 2012။
↑ Ripley၊ Amanda။ "The Story of Barack Obama's Mother"၊ Time၊ April 9, 2008။ 2008-06-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 1 April 2012။ See also: Suryakusuma၊ Julia။ "Obama for President... of Indonesia"၊ Jakarta Post၊ November 29, 2006။ 2008-06-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 29 September 2007။
↑ Boss-Bicak, Shira။ "Barack Obama '83"၊ Columbia College Today၊ January 2005။ 2008-06-09 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on5September 2008။
↑ ၁၈.၀ ၁၈.၁ Butterfield, Fox။ "First black elected to head Harvard's Law Review"၊ The New York Times၊ 1990-02-06၊ စာ- A20။ 2008-06-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Ybarra, Michael J။ "Activist in Chicago now heads Harvard Law Review" (paid archive)၊ Chicago Tribune၊ 1990-02-07၊ စာ- 3။ 2008-06-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on9October 2012။ Matchan, Linda။ "A Law Review breakthrough" (paid archive)၊ The Boston Globe၊ 1990-02-15၊ စာ- 29။ 2008-06-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on6June 2008။ Corr, John။ "From mean streets to hallowed halls" (paid archive)၊ The Philadelphia Inquirer၊ 1990-02-27၊ စာ- C01။ 2008-06-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Drummond, Tammerlin။ "Barack Obama's Law; Harvard Law Review's first black president plansalife of public service" (paid archive)၊ Los Angeles Times၊ 1990-03-12၊ စာ- E1။ 2008-06-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on9October 2012။ Pugh, Allison J. (Associated Press)။ "Law Review's first black president aims to help poor" (paid archive)၊ The Miami Herald၊ 1990-04-18၊ စာ- C01။ 2008-06-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Aguilar, Louis။ "Survey: Law firms slow to add minority partners" (paid archive)၊ Chicago Tribune၊ 1990-07-11၊ စာ- 1 (Business)။ 2008-06-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 26 July 2013။ "Barack Obama,asummer associate at Hopkins & Sutter in Chicago"
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘာရက်_အိုဘားမား&oldid=740270" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ ဧပြီ ၂၀၂၂၊ ၀၀:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။